Unozivei nezve SEO kwemasayiti matsva?
Pano pane mamwe mazano pamusoro pe SEO yakarurama yemasayiti emashoko, sezvo mapeji akadai akadarika mamwe magwagwa akawanda. Zvose zvinogona kunge zviri nyore, sezvinobatsirwa neKushandiswa Engine Optimization imwe nhare yewebhu webhusaiti inogona kushanda nenzira iyi inobhadhara yekukwevera vaverengi vakawanda vatsva nekuvashandura kuva vateereri vari kukura vevaverengi vakamira. Nenzira iyo, iwe unorayirwa kuisa zvinyorwa zvitsva uye zvichangobva kuongororwa zviripo. Zvinyorwa zvako zvinyorwa zvinofanira kuva zvidzidzo uye nguva dzose zvakasiyana, iyo iri pedyo neSEO yose yemasayiti emashoko anowanzodiwa. Asi edza kusasarudza chero hupi hupi hutsvuku hwemafuti, uyewo kudzivirira magwaro ako kubva pakufuridzirwa nemashoko makuru, kubatanidza spamming, zvinyorwa zvinyorwa uye nezvimwe zvakadaro.
Pasi pane mazano akawanda anobatsira, kubva pakuona kwe SEO yemasayiti ehau. Vakawanda vavo vakaedzwa uye vanoshandiswa-vakaratidza apo ini ndaiva neruzivo rwekushanda pane webhusaiti yepapepanhau:
Shandisai zvinyorwa kugadzirisa, sezvo shanduro yekugadzirisa injini ichinyatsogadziriswa nehuwandu hwepamusoro muSERPs. Nokudaro, ivai nehuwandu hune hupfumi, huzere, hunobatsira, uye nguva dzose huchigutsikana, hwakatsigirwa nemisoro mikuru inotsanangura mavhidhiyo ega yega yewebhu mukati mazvo. Inzwa wakasununguka kuisa mazwi echirevo kana mazwi mashoma kumanyorero emuviri, uye mifananidzo yezvinyorwa zvepamusoro zvakare. Nenzira iyo, cherechedza, zvisinei, kuti uchengetedze chokwadi chakakosha chemashoko mukati me2 peresenti yemagwaro ose ezvinyorwa. Kuti uwane mamwe mashoko, iwe unogona kugara uchitarisa kuburikidza nemirayiridzo yepamutemo neGoogle
Kuita SEO yemasayiti emashoko, unofanira kubhadhara zvakanyanya kuhutungiridzo hwe URL paunenge uine peji rimwe nerimwe kana kuti zvinyorwa. Nguva dzose chengetedza kaviri kuti uise mazwi echokwadi kana keyfrases kune URL yega yega iwe unenge uchitanga, apo kuvandudza zviripo zvingavawo pfungwa yakawanda-inobatsira vadzidzisi vako, uye yakanakisisa yekukamba nema robots ekutsvaga panguva imwe chete. Uyewo, uchifunga SEO yemasayiti emashoko, iwe unorayirwa kuvhara yako URL imwe neimwe nenhamba isina kukwana kupfuura nhatu nhamba muhurefu.
Uye pano inouya chete iyo inonyanya kukosha meta tags guideline ye SEO yemasayiti emashoko, saka zviri nani kuti uone zvinotevera paunenge uchidziisa:
Chokutanga pane zvose, meta tag se news_keywords ichabatsira vose muparidzi (kurega kutsanangura uye kuisa huwandu hwemashoko), pamwe chete nevadzidzisi chaivo (zvichiita nyore kuongorora zvakare kana kugovera mashoko, somuenzaniso , via social links profiles)
Yeuka, chete zviratidzo zvinobvumirwa mu URL dzako nemeta tag. Vashandise chete kuti vaparadzanise mazwi uye mazwi mashoma.
Mazhinji emazwi makuru pano angangodaro aine kukosha kwakadaro, ndinoreva kana tichitaura nezve SEO nekuda kwemasayithi
Pakati pezvinhu zvinonyanya kukosha pano ndiyo sarudzo yekushandisa kusvika 10 keywords semashoko, e. g. , kugadzira taiti itsva yechinyorwa chako chitsva chinobudiswa. Kuita kudaro, iwe uchange uchinge uine maitiro maviri-chengetedza: kana zvikaitika here kuti chimwe chimwe chinhu chinoratidza kuti hachibatsiri pane nyaya yacho, vashandi vanogona kukurumidza kurondedzera kuti zvigadziriswe pakarepo Source .